0.1 "Ei Jerry, šonas baan lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"
0.2 „Habka“ 2: „Facebook“
0.2.1 „Facebook“ žinynas „Facebook“ puslapis „Facebook“ grupėje, jei norite, kad jūsų žinios būtų pateiktos
0.2.2 „Facebook“ internetinė svetainė „Talooyin si aad uhesho tartamayaasha“
0.3 „Habka“ 3: „Cilmi-baarista Qalabka Dugsiga Old-Old“
0.4 Waa maxay waxa ku jira xogta raktinis žodis?
0.5 Isticmaalida cilmi-baaris vaškas-degutas leh oo lagu barto niša: Bandhig degdeg ah
0.6 „Go’aan sameynta“: Meel yar oo ballaaran oo ballaaran?
1 Tikslinga „Gaadiidka“
1.1 Siyaabaha ugu waxtarka badan ee loogu talagalay barbaarintada
1.3 3. „Facebook“ skelbimas
"Ei Jerry, šonas baan lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"
Hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan helayaa "lacag ka samee internetka" su’aalaha asxaabta iyo qoyska.
Qaar waxay rabaan bilaw barta oo dakhliga qaar ka dhigo internetka. Kuwa kale, tai jūs galite nuskaityti jahawareerka joogtada ah ee shaqada, tai yra balaadhiyaan ganacsigooda internetka, ina joojiyaan shaqadooda 9-ilaa-5, iwm.
Waxaan runtii rabaa in aan caawiyo kuwa aan ogahay inay atvykęs į guuleystaaną. Laakiin, waxaan kaliya oo aan wadaagaa inta badan inta lagu guda jiro kulannada qof ahaaneed ama Whatsapp ama Facebook Messenger.
Sidaa susijaudino, waxaan qorayaa qoraalkan dheer si aan ula wadaagno casharrada aan bartay sida imtixaanka sanadka ugu dambeeyay ee 15.
„Habka“ 2: „Facebook“
„Waxaad sameyn kartaa“ vaškas „badan oo“, „bada inta la wadago sawirrada safarka“, „boostada“, kaip purvo „Facebook“.
„Facebook“ žinynas „Facebook“ puslapis „Facebook“ grupėje, jei norite, kad jūsų žinios būtų pateiktos
„Haddii aad hore u haysatid“ „Facebook“ puslapyje (waxaad abuuri kartaa mid ka hor intaadan bilaabin blog, waa bilaash), meesha ugu horaysa ee aad eegto waa saldhiggaaga masraxaada. Ku qaybi qaar ka mid ah taageerayaashaas "profilis" oo fiiro gaar ah u leh niyadjabkooda (lab / dhedig, meelo, guursaday / hal / isqaba, da’da, iwm) iyo danahooda.
Kaip sužinoti „Kooxda Facebook“ – akhri dadka isticmaala wadahadalka ir jūs, fahmaan dhibaatooyinkooda iyo baahidooda.
„Facebook“ internetinė svetainė „Talooyin si aad uhesho tartamayaasha“
Wixii kuwa leh bogga Facebook, waxaad u tagtaa Insights> Apžvalga> Žiūrimi puslapiai. Tani waa halka aad ka heli karto oo yra barbar dhigi karto boggaga la soo bandhigay ee Facebook. „Waxaad riixi kartaa xiriir kasta si aad ugagato fariimaha caanka ah ee dagu daabacay boggaan.
„Bogagga la daawado“ – tai „Facebook“ vidurkis, o ne aš, bet taip..
„Sida loo isticmaalo Facebook khadka“
Raadi mowduucyada mawduuca ku saabsan niša – „Waa maxay boodboodka ugu dambeeyay ee magaalada“? Miyaad ka heli kartaa xagasha cusub ee blogka adiga oo eegaya isbeddelladan?
Klausimas apie nišą „cusub adoo eegaya dhaqdhaqaaqyada“ kale ee ciyaartoyda – „Tani waxay aheyd sidii aan u ogaaday nuqulka sawirada markii aan darsaday webka“ (CSS / jQuery / HTML5) tinklaraščiai.
Fahmee dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah – Halkee ayay ku qaataan internetka? Waa maxay dhibaatooyinkooda? Ma čia kartaa xal?
Eegas sabata yra dadku iibsanayaan tartamayaashaada – Miyaad bixin kartaa vaškas viduryje ah oo lacag sameynaya?
Eeg sababta dadku uga iibsanin tartamayaashaada – Alaabadooda miyuu caajis leeyahay? Waxaa laga yaabaa inaysan ku iibineynin mid sax ah. Miyaad vaškas ka qaban kartaa oo aad ku guuleysan kartaa martida?
Qoraan xarfo iyo mawduucyo wacan oo wanaagsan – „Soo ogow kuwa Facebook“, jei norite, kad biiraya ugu sareeya, qor qoraallada isku midka ah.
„Habka“ 3: „Cilmi-baarista Qalabka Dugsiga Old-Old“
Ama sug … ma lihin? Waa hagaagayaa inaanan garaacin faras dhintay, sidaas darteed Halkan waa akhris wanaagsan oo bilowga ah.
Dheecaan dheer ah sida erayga muhiimka ah ee erayga gaaban (kreditas: Soo dir Fox).
Sukurkite visą vašą, bet ne taip gerai, kaip SEO. Ujeeddadeeda, inta badan maaha, waa in the ogaado ereyada la raadiyay ee soo noqnoqota (waa gaaban ama gaaban waqti dheer) oo tilmaamaya tilmaamaha ololaha.
Waa maxay waxa ku jira xogta raktinis žodis?
Hase yeeshee, sida ugu aqoonta badan ee vaškas taip saarka ganacsadaha – waxaa jira waxyaabo badan oo, tai ka muuqato xogta muhiimka ah. Iyada oo kubboon qodobbada muhiimka ah, waxaan sidoo kale fahmi karnaa kuwa soo socda si ka fiican (aš laga yaabo inay sidoo kale soo bandhigaan fursado ganacsi oo cusub):
„Noocyada Xiriirka iyo Magacyada“
„Tusaale ahaan“: „Koobiyeyaasha“ – „Nikon“, „Canon“, „Sony“; Balaayiin Bale, Maldyvai, Havajai; interneto prieglobai – „iPage“, „BlueHost“, „Hostgator“; musharaxiinta – Taylor Swift, Linkin parkas, Bruno Mars.
Guud ahaan marka la hadlayo, ujeedka iibsashada ayaa ka sarreeya marka ay jiraan baaritaanno badan oo ku saabsan ‘dib u eegista widget’, ‘Moodhka tirada iyo magaca’, ’10 sumadaha ugu fiican ‘,’ Iibso widget khadka tooska ah ‘. Taa bedelkeeda, raadinta ‘taariikhda aaladda widget’, ‘widget cabdi’, ama ‘samaynta aaladda widget’ ayaa loo badinayaa in aan loo beddelin macaamil ganacsi.
Isticmaalida cilmi-baaris vaškas-degutas leh oo lagu barto niša: Bandhig degdeg ah
Markii aan bilaabay markii ugu horeysay, tėtis badan oo websaydh ah („warqad“ – „Blogger“ ženklas „Ma ahayn erey caan ah“) „waxay ku tiirsan yihiin qalab la yiraahdo“ "Uvertiūra" – halkaas oo aad si fudud u geli karto ereyga raadinta iyo nidaamkuna wuxuu ku this doonaa shakhsi adata inta jeer ee ereyga la baaro, bilaash ah. Ka dibna waxaan isbarbardhigi doonaa nambaradan natiijooyinka natiijooyinka soo noqnoqday oo xukumaan tartanka (iyo faa’iidada) ee niša.
„Hadda“ uvertiūroje „Aan la sii haynin waxaan si dhib leh u heli karnaa xogta muhiimka ah ee lagu kalsoon yahay“.
„Qorshaha“ raktinis žodis „Google waa mid ka mid ah qalabyada muhiimka ah ee aan weli isticmaalo maanta“ (haddii aad awoodi kartid inaad bixiso qalabka lacag bixinta, waxaan ku talinayaa AHREFS iyo SEM Rush).
Sawirada soo socda, waxaan soo bandhigi doonaa sida aan u isticmaalo qalabkaan si aan u barto niša oo aan u fasirno xogta la helay. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa waqti aad u yar (ka yar saacadaha 30) ama waxay qaadan kartaa maalmo si loo dhammeeyo. Waxay ku xiran tahay inta ay le’eg tahay liiska muhiimka ah ee liiska muhiimka ah iyo sida qoto dheer ee aad dooneysid inaad ku nasto si aad u fahamto muuqaalka ganacsiga.
„Sawirrada filimka ayaa“ turėjo tave, kaip aš, viduryje, o viduryje, o ne ururrada aan jeclahay. Anigu runtii ma soo aruurin, laakiin waan ku faraxsanahay farshaxanka iyo qiimaha dareenka ah. Aynu aragno haddii aan daneynayno fikradayda fikrada dienoraščiai faa’iido leh. Ogow in aanan samayn wax cilmi ah ka hor inta aanad qorin hage – sidaas ayaan ahay sida aad hadda xaq u leedahay.
„Marka hore aynu eegno muuqaalka“.
Raadinta garaafka, waxay u muuqataa in mawduucdu aunt ka luntay xakamaynta internetka – taas oo viduryje caqli-gal ah haddii aad eegto wakhtiga dadku ku qaataan YouTube-ka maalmahan.
Hoosudhaca, waxaan sidoo kale arki karnaa inta badan dadka raadinaya inay ku yaalaan Mareykanka, Kenija, Indija, Australija, iyo Kanada.
Si aad u fahamtid jaantuska si wanaagsan, waxaan badanaa isbarbardhigaa raadinta raadinta raadinta aan la garanayn oo aan vaškas ka ogaanayo. Tusaalahan, waxaan ku darey ereyga raadinta "dib u eegista marti gelinta". „Waxaad arki kartaa in dadkaas ay jiraan“ tėtis badanas oo raadinaya "sawirada filimada".
„Qorshaha Keydka Google“
Marka xigta, waxaanu tagi doonaa Qorshaha Keydka ee „Google“, jei norite pamatyti Fikrado Badaną.
Ku qor "faylka filimada" sanduuqa raadinta oo ku dhufo "„Fikto Hel“".
Bogga ugu horreeya ee natiijada (fiiri sawirka hoos ku qoran) ayaa muujinaya in ay jiraan baaritaano fara badan oo loogu talagalay sawirada filimada (41 900 + raadinta bil kasta), sawirada filimka naxdinta leh (5600 + radijo filma, kasta), sawirada filma, kasta filimada (3.400 + raadinta bil kasta), Holivudo sawirada filinka (1.600 + raadinta bishii), iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, waxaa sidoo kale jira dalab aad u sarreeya oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan abuurista sawirada filinkaaga (~ 22 000 bishiiba).
Si aad u qaaddo hal tallaabo, waxaan ku dhejin karnaa erayga muhiimka ah ee faahfaahin dheeraad ah. Tani waa halka aan ku fahmi karno raadiyaha ‘ujeedada si ka fiican. Ka taxadar nooca macluumaadka radinayaashu raadinayaan.
Miyeyn karnaa inaan iibinno niyaddeena raadinta (haddii qorshahayagu yahay inaan si toos ah u iibino sawirada filimada)? Sidoo kopūstai, xarumahani waxay noqon karaan mawduucyada tinklaraščiai.
Waxaa suurtagal ah in sawirada filimada jigsawaa tahay fikrad ganacsi oo wanaagsan.
Maxaa dhacaya haddii aan doorbideynin inaan iibino alaabta jireed? Waad ogtahay – ma ahan vaškas faa’iido leh iyo sahaydaba. Miyaan kaliya karnaa oo aan iibin karnaa booska xayeysiiska? Si aad uga jawaabto su’aashan, aan isku dayno raadinta khadka ah ee Google iyo arag haddii aan ku ogaan karno xayeysiiyaha ama barnaamijyada midnimada.
Sidoo kopūstai, waxaad fiirin kartaa habka suuq-xayeysiinta ee xayaysiinta – ma waxay ku xayeysiinayaan boogaha sare ee xayeysiisyada raadinta? Hadday sidaas tahay, nooca blogka? Ma iibin kartaa xayaysiinta si toos ah ganacsatadaas? Si looga faa’iideysto faa’iidada mawduucan, waxaan ku dari karnaa xogtan muhiimka ah ee loo yaqaan „Spyfu“ si loo ogaado inta xayeysiiyayaashu ay kharashka bixiyaan.
Si aad u sii dheeraato, waxaa laga yaabaa inaan dooneyno inaan qodno natiijooyinka raadinta bini’aadamka (xiriirrada bogga, bogsashooyinka bogga, saamiyada warbaahinta bulshada, iwm.) Si loo arko sida SEO.
„Go’aan sameynta“: Meel yar oo ballaaran oo ballaaran?
Hadda waxaan haysannaa dhamaan suuqyada lagama maarmaanka u ah – waa waqtigii la go’aansan lahaa. Miyay tahay inaan ku boodno? Tani miyuu wanaagsan yahay? Maxay noqon lahayd xagal wanaagsan oo la xidhiidha niša? Waan mėnuo dhaafi doonaa si aan u soo gabagabeeyo.
Mid ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahaa in aan caddeeyo ka hor inta aanan soo gabagabeyno qaybtan – wuxuu ku saabsan yahay sida aad u go’aansato niša.
Qaar badan oo khabiiro ah waxay soo jeediyaan waxyaabo cusub and fogaadaan tartanka SEO tartan ee tartanka ah iyo inay qaataan beer yar oo yar yar marka la dooranayo niche.
Waxaan aaminsanahay in ka soo horjeeda dhabta ah. Waa inaad isku daydaa balli aad u ballaaran (shuruudaha raadinta bartilmaameedka leh dalab badan iyo tiro badan oo tartan weyn) sababtoo ah taasi waa meesha aha dhagaystayaashu iyo lacagku yihiin.
Waxaan haatan u dhaqaaqi doonaa qodob muhiim ah # 2: „Taraafic“ tikslinė
„Helitaanka dhagaystayaasha la beegsanayo“ (aš turiu tinkamas makumaumaadka ay rabaan) „Waxay“ turėjau tau aiškią žinią apie furaha guusha internetka.
Gaariga taraafigga ah ee aad udheeraato waxaad blog dien he hesasaa, lacag badan oo aad sameyn kartid.
Waa xisaab fudud – Aan sheegno dienoraštyje-DIY oo, aad ka iibiso farshaxanka gacanta. Qiyaasta celceliska blogda ee celceliska celceliska waa 3% celceliska qiimaha celceliska waa $ 25. Celcelis ahaan, booqdayaasha 100 ee kasta waxaad samayn doontaa iibinta 3 oo waxay sameyn doontaa 75 $. waxay ahaan doonaan lix iibsasho iyo $ 150 būdas faa’iidi karaan wadada.
Siyaabaha ugu waxtarka badan ee loogu talagalay barbaarintada
Kahor intaanan ar galin xeeladaha gaarka ah iyo istiraatiijiyadaha taraafikada, aynu ka hadalno istiraatiijiyad guud oo weyn.
Habka ugu fiican ee dagu dhiirrigelin karo tinklaraštis waa in la xoojiyo waxyaabaha horeba u shaqeynaya bloggaaga.
Si atvykęs į tą patį žodį, vakstau ir noriu:
„Xogta saxda“ ah
Waan ognahay in the xogtu ay muhiim u tahay kobacaada blogka.
Pažymėkite „Google Analytics“, „warbixinta ayaa noqon karta mid aad and adag“. Tirooyin badanas! Oo waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn qaar ka mid ah metrics ama fikradaha.
Nambarada / fikradaha gali jums pasakyti, kad aš
Si daacadnimo ah uma maleynayo dienoraščių kūrėjai nori inay waqti badan ku qaataan warbixinta Google Analytic.
Kaip žiūrėti iš „Google Analytics“ žiniatinklio, jei norite sužinoti daugiau:
Tu turi tą pačią dieną, kai turi haysato xogta gacanta … maxaad samaysaa?
„Google Analytics“ („Qaadashada“> Dhamaanas Gaadiidka> Isha / Dhexe)
(Siūlykite naują informaciją, naudodami „Google Analytics“ informacijos suvestinę> Habdhaqanka> Mawduucyada Mashruuca> Dhamaanas Bogagga.)
Fursadaha sare ee daina wadaagayo warbaahinta bulshada
„Fursad ka sarreeysa liiska sare ee Google“ („Sida sicirada saamileyda ee“ gauna „Google“)
Mowduucyadee ayaa ja muuqda inay ugu caansan yihiin dadka isticmaala?
Furaha ayaa ah la xoojiyo guuleystayaasha oo ka dhigo kuwa ugu fiican iyaga.
Taasna waxaa laga yaabaa inaysan ku čiain kicin degdeg ah oo ku socda barta internetka. Sveiki, yeeshee, sida kubbooyinka barafka ah – baaxadda ayaa ka weyntahay xeelado badan.
Hadda oo aan ku dhaqaaqno istiraatiijiyadda guud, waa waqtigii aan ku fiirin lahayn xeelado gaar ah oo taraafik ah oo blog.
Ayadoon loo eegin sida Google yra asaasayso habdhaqanka dhejinta martida – tabahaasi wuu shaqeeyaa. Ku qorista qoraallada martida tayada leh ee baloogyada dadka kale si fudud ayaa ah habka ugu hufan ee lagu gaadho dhagaystayaasha lala beegsanayo laguna dhiso akhristaha blog.
Furaha guusha, sida aan u arko, waxa raadineysaa blogyada saxda ah – kuwa haysta akhristayaasha dhabta ah iyo taageerayaasha warbaahinta bulshada. „Waxaad isticmaali kartaa Topsy“ arba „Buzz Sumo si aad u aragto baloogyada caanka ah iyo gotyn ku yeelashada wershadahaaga“. Ama, sahlan ayaad u qaadan kartaa fiiro gaar ah qeybta faallooyinka si aad u aragto haddii akhristayaasha a fal lalayaan kuwa wax qora. Jei turėtum tu maskaxda ku šieno inaad vašką, ku dhajinayso akhristayaasha dhabta ah (sidaa darteed tayada waxyaabahaaga ay muhiim tahay). Ha ilaawin ku dhejinta dhejinta boggaga leh Google „sare laakiin akhristayaasha eber“ – dakakanas ir fudud uma shaqeeyo 2015 m..
„Qalabka SEO“ yra tas, kuris yra žinomas kaip khabiirada warshadaha
3. „Facebook“ skelbimas
„Facebook“ waa qaab kharash ah oo waxtar leh („waxay u socotaa sida hooseeya ee $ 0.06 / shabakad ku xiran tahay warshadaha qaarkood) si aad ugu qaadatid booqdayaasha cusub ee loogu talagalay. Qaybaha caqabadaha ku ah xayeesiinta Facebook waa inaad and baahatid inaad tijaabiso waxyaabo kala duwan (dala kala duwan, dalal kala duwan, danaha kala duwan, iwm) si loo guuleysto.
Contents0.1 "헤이 제리, sidee baan lacag kuugu sameeyn 카라라 lacagta sida adiga?"0.2 합카 #
Contents0.1 "Hej Jerry, sidebana lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"0.2 Habka # 2:
Contents0.1 "Ei, Džerijs, sānu baan lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"0.2 Habka #
Twa Fason Fasil yo kreye yon Sitwèb：Etap-pa-etap Beginner Gid
Учебное пособие по WordPress: Quam Crea Awesome Page Flip Плагины
15 прекрасних ВордПресс Теамаи до салона лепоте агас спас
د ډیری ویب څنګه لاسرسی: تور ویب ی براؤزر ، او د ان ارنټ وټب یاپ ګورت کول
Jak zarabiać pieniądze jako partner
11 darmowych wtyczek WordPress w celu zwiększenia liczby opcji, udziałów i konwersji